N95 Neefsade, Maaskarada Wejiga La Tuuri karo, Maaskarada Wejiga Kn95 - Shuer
Sichuan Shuer Qalabka Qalabka Caafimaadka Co., Ltd. waa shirkad tiknoolajiyad sare leh oo diiradda saareysa cilmi baarista, horumarinta, soo saarista iyo iibinta alaabada maaskaro. Xarunteeda dhexe iyo salkeeda R&D waxay ku yaalliin muuqaalka quruxda badan ee Chengdu, kaas oo loo yaqaan magaaladii ay ka yimaadeen pandas weyn. Warshadda ayaa baaxadeedu tahay 9,872 mitir murabac. , U samee khadad wax soo saar oo loogu talagalay nus-dhammaadka dharka meltblown / dharka aan tolnayn / wejiyada. Shirkaddu waxay leedahay teknolojiyad adag iyo awoodo R&D ah, oo ay dowladdu u aqoonsan tahay "shirkad tiknoolajiyad sare leh iyo waaxda dammaanadda sahayda ee Shiinaha."
Shirkad La Aasaasay
Shirkaddu had iyo jeer waxay u hoggaansameysaa mabda'a maareynta ee hibada u leh hibada iyo daacadnimada ganacsiga. Waxay leedahay maareyn wax soo saar iyo cilmi baaris farsamo iyo koox horumarineed oo ka kooban 15 masters, bachelor-ka cinwaano farsamo oo heer sare ah, iyo qolal baaritaan gaar ah (17 qalabka baaritaanka) iyo shaybaarrada cilmi baarista tikniyoolajiyadda. , Si ay ugu suurogasho shirkadda inay sii ahaato mid ku tartamaysa tartanka adag ee suuqa iyo xasilinta tayada wax soo saarka. Waxay leedahay 6 khadadka wax soo saarka dharka aan tolnayn oo dhalaalaya, 2 khadadka waxsoosaarka dharka aan tolmo lahayn, 1 khadadka isku xidhka ah ee ultrasonic, iyo 1 dhibic dhibic isku xidha, 1 khad soosaarid ah oo loogu talagalay qalliinka, 10 khadadka wax soo saarka ee loogu talagalay maaskaro fidsan, 3 khadadka wax soo saarka maaskaro saddex-cabbir ah, iyo 2 khad oo wax soo saar ah oo loogu talagalay waji-koobabka u eg. Soo saarida iyo tayada ayaa la isla hagaajiyaa!
Mashiinka iyo qalabka
5500t + 1 bilyan
Silsiladdeena alaabta keena
MAKIINADDA AAN LAHAYN
3-Lakabka Maaskarada Wajiga la iska Tuuri Karo ee Bakteeriyada (The ...
3-Lakabka Maaskarada wajiga la iska tuuri karo ee Anti-bakteeriyada (Sta ...
Hal ku dhig shirkadeed
Dhaqdhaqaaqayaasha ka socda Greenpeace waxay ku sugnaayeen maxkamada UK bishan kadib markii ay halku dhigyo ku dul qiiqeen qiiqa dabka saldhiga tamarta dhuxusha laga soo saaro ee Kingsnorth ee Kent, taasi oo qeyb ka ah mudaharaad looga soo horjeedo qorshayaasha warshad dhuxusha laga sameeyo goobta.
Taageerayaasha Indian BTS waxay si dhakhso ah u ururiyaan lacag kaash ah ...
Dhibaatada coronavirus Iyadoo ay sii kordheyso dhibaatada coronavirus-ka ee India, taageerayaasha BTS ayaa qaaday tallaabo ay ku aruurinayaan lacag si ay u caawiyaan kuwa u baahan. Toddobaadkii hore, dadaallada gargaarka ee 'Covid-19' oo ay abaabuleen koox ka socota B ...
Raac talaabooyinkan si aad u xidhato, uga baxdo oo u xidhato maaskaro 3M waji-maalinle ah. Maaskarada maalinlaha ah waxay ku habboon yihiin xirashada maalinlaha ah ee goobaha dadweynaha, waa la dhaqi karaa oo dib ayaa loo isticmaali karaa qiime muddo dheer soconaya. Our ...
Maaskarada ma ilaalisaa dadka iyaga xiran ...
“Waxaan u maleynayaa inay jiraan cadeymo ku filan oo sheegaya in faa'iidada ugu fiican ay tahay dadka qaba COVID-19 inay ka ilaaliso inay siiyaan dadka kale COVID-19, laakiin waxaad weli ka faa’iideysan doontaa xirashada ...
2018 Sichuan Ju Neng Dayrta Canton Fair e ...
6dii fiidnimo ee Noofambar 4, 2018, Bandhiggii Dayrta ee Dayrta, oo ay ka soo qayb galeen Sichuan Ju Neng, ayaa si guul leh loogu soo gabagabeeyey! Bandhigu wuxuu qaatay 5 maalmood wuxuuna helay wadar ahaan 127 macaamiisha dibada ah ...
Beijing waxay ka qayb qaadataa Shiinaha Medical Acc ...
Sichuan Jueneng Qalabka Filter Diyaarinta ...
(Sharax kooban oo kooban) Shirkadu waxay ahmiyad weyn siineysaa Carwada Canton deyrta waxayna sameysay diyaar garow firfircoon tan. Qabanqaabada soo socota ayaa la sameeyay: Ex ...
Heer aan la mid ahayn oo tayo iyo adeegba leh Waxaan siineynaa adeegyo xirfadaysan oo habeysan oo loogu talagalay kooxaha iyo shaqsiyaadka Waxaan sare uqaadeynaa adeegeena annagoo qiimeyneyna qiimaha ugu hooseeya
Alaabada Kulul - Khariidadda bogga - AMP Mobile 3 Lakab Maaskaro La Tuuri Karo Iyadoo Fda, Heerka 3 Maaskarada Qalliinka, 3 Maaskarada Wajiga ee Fly Non-xidhkii, 3ply Maaskaro Maaskaro Waji ah, Maaskaro Ffp3, 3ply Maqaalka Wajiga Qalliinka,